Nzaghachi Australia na COVID-19 kwesịrị ịbanye na ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa Australia » Nzaghachi Australia na COVID-19 kwesịrị ịbanye na ụwa
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nzaghachi Australia na COVID-19 - ENCORE
Nzaghachi Australia na COVID-19 nwere ọtụtụ mba enwere anyaụfụ. Dr. Fauci toro mba a n'oge na-adịbeghị anya maka ịbụ onye ndu ụwa na "njikwa na njikwa nke ụdị dị iche iche."
Ka ọ dị na Machị 23, Ọstrelia nwere naanị ikpe 5 nke COVID-19 na nso nso a, sitere na ụmụ amaala na-alọta mba ofesi.
Mgbe mbụ COVID-19 ghọrọ ihe iyi egwu nye Australia, gọọmentị etiti gọọmentị zara ọsọ ọsọ site na imechi oke mba ụwa na itinye usoro iwu iwepụ n'ụlọ.
Sydney Opera House nwere ike gosipụta opera Ertali "Ernani" site n'aka Giuseppe Verdi n'oge oria ojoo a ka na-ejide ụwa.
N'ihe pụrụ iche nke ụwa mmepụta ihe, Sydney Opera House gosipụtara opera Italiantali "Ernani" site n'aka Giuseppe Verdi n'oge ọrịa na-efe efe nke ka na-ejide ụwa.
William A. Haseltine, onye sayensị nke America bụ onye ama ama maka ọrụ ya dị egwu banyere HIV / AIDS, mkpụrụ ndụ ihe nketa mmadụ, na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa, mere ka a mata ihe ịga nke ọma nke atụmatụ ndị ahụ Gọọmenti Australia na nke mbụ ntiwapụ nke COVID-19 n'otu n'ime akwụkwọ akụkọ ya na isiokwu ahụ.
Ka ọ dị na Machị 23, 2020, Ọstrelia nwere naanị ikpe 5 nke COVID-19 na-adịbeghị anya, sitere na ụmụ amaala Australia na-alaghachi mba ofesi na iche iche na họtel ahụ tinyere ha.
Mgbe mbụ COVID-19 ghọrọ ezigbo ihe iyi egwu nye Australia, gọọmentị etiti gọọmentị zara ọsọ ọsọ site na imechi oke mba ụwa na itinye usoro nnọpụiche n'ụlọ maka ụmụ amaala Australia. Steeti na ókèala ndị ahụ mechiri ókèala ha nwa oge nke mbụ ya kemgbe 1919 n'oge ọrịa na-efe efe Spanish.